Ndiyakuvuyela ngosuku lwakho lomtshato. Ubuliso obuhle kakhulu kunye nesifiso sokuqala somtshato womtshato kubazali.
Ukukhethwa kwezibingelelo ezilungileyo kunye nesifiso sokukhumbula umtshato
Akunandaba nokuba iminyaka emininzi idlulileyo ukususela ngomhla womtshato, ngalo mhla isibini esithandanayo sihlala sisisithandana esithandana esithandwayo. Into ephambili ayikulibala ukuwahalalisela ngokuchanekileyo kwaye unqwenela ukuqhubeka nokuphila kakuhle kwintsapho. Zonke iindwendwe, abahlobo, abantwana kunye nabazukulu kufuneka babuthele kwitafile yokuzonwabisa ukuze bathathe iiglasi. Eninzi malunga nemitshato yomtshato ungafunda apha .
Ukuba umtshakazi nomyeni baye bahlala iminyaka eyi-10, ngoko umtshato onjalo uthathwa njengepinki okanye i-tin. Umnyaka wama-20 ubizwa ngokuba yi-porcelain, kwaye i-20 kuthiwa i-pearl. Kule mihla ekhethekileyo, abantu abatsha balindele amagama amnandi nefudumala kwizihlobo kunye nabahlobo. Silungele ukukunika inkondlo kunye neprosaic.
Ndiyakuvuyela ngomtshato we-porcelain kunye nomtshato we-satin
Iminyaka engamashumi amabini emva komtshato, umtshato wokugcoba. Esi sihlandlo esihle kakhulu, kuba ubudlelwane phakathi kwabatshatileyo banjengobumba beChina. Indawo ekhethekileyo inikwa abantwana. Akunabantu abadala, kodwa abayintsana, bayayixabisa ubudlelwane phakathi kwentsapho kwaye bayavuya bancoma abazali babo.
Makunyuke emininzi iminyaka ukususela kuloo xesha,
Xa beqala ukudibana,
Xa umtshato wanyuka kwada kwasa,
Kwaye waqala ukubizwa ngokuba ngumfazi.
Ndiyabulela ukuba ndilapha,
Isiqhamo sakho sothando sihle, siqhakazile, sihlambulukile.
Vumela iindaba zolonwabo ziqhube emhlabeni
Kwaye kubonakaliswa kwamehlo omlilo.
Abazali abathandekayo, ngokukhumbula umtshato
Ndikhangele kwaye ndibone, njengokungathi ebomini bokwenene:
Ubaba e-suit, umama ogqoke umhlophe,
Isiphumo: kwihlabathi kunye nawe ndihlala.
Ukuqamba ivesi echasayo
Emva koko, namhlanje ngumsitho wokukhumbula
Ekulondolozeni umtshato. " Sensimbi
Ukusebenzisana kwakho, kungenjalo.
Izihlobo - idayimane.
Ndiyathethelwa ngawe ngenxa yokungahlawulwa.
Unyana wam unesidima!
Ndinekratshi gqitha, lam lamane,
Kwaye ndihlala ndihlala umzekelo!
Iminyaka engamashumi amabini edlulileyo badlala umtshato,
Iminyaka engamashumi amabini - usapho olonwabileyo!
Kukho imoto, indlu, kukho umfama,
Unabantwana, kwaye kukho abahlobo!
Makhe konke kwaye kulungile;
Ikhobe epheleleyo iya kuvumela ikhaya lakho,
Kwaye kwintsapho yonke into yakho iya kuhamba,
Yaye uthando luvutha ezintliziyweni ngomlilo!
Umtshato wama-24 ngumtshato we-satin. Lo awukho umhla ojikelezayo, ngoko ugujwa kunye nosapho. Nangona kunjalo, sinika isibingelelo sokuqala somtshato we-satin.
Uthando lwakho lugcina ulutsha,
Ngamehlo akafaki ukukhanya okukhazimulayo;
Ndiyakhumbula ukuba uhlala njalo nje,
Xa inqaba yathathwa entliziyweni.
Ndiyakuvuyela umkhosi wakho womtshato.
Kwaye ndifuna ukunqwenela iminyaka emininzi,
Ukuze uphile, ukhuthazana,
Ndivule kunye nemfihlo yakho yemilingo.
Ndiyakuvuyela ngomtshato weperele
Kuyinto yesiko ukunika ubucwebe beeparele kwi-wedding pearl. Amagama okuvuyisana nawo kufuneka axabiseke.
Wonke umntu uqokelelwe namhlanje etafuleni elihle,
Ngoko ukuze usho amazwi anomusa nomfudumele kuwe,
Indlu yakho mayibe indebe epheleleyo,
UThixo unike ukuba ungalili kwaye ungadli.
Ngomtshato weperile, siyavuyisana nawe,
Ndikunqwenela impilo kunye nolonwabo,
Phila ngoxolo, abazali, ukuya kwikhulu,
Ngamana uThixo unokukhusela njalo.
Imibhiyozo yokubakho iminyaka engamashumi amathathu iququzelelwe ngabazali babantwana. Sinikela ukuba sifunde kubantwana kwi-wedding pearl.
Iminyaka engama-30 ihlala kunye, abazali abathandekayo,
Zonke izithintelo zentsapho ophume ukuphumelela,
Inkulu enkulu yabuthana etafileni,
Unokubona ngokukhawuleza ukuba isithuba sakho sikuvule ngokukhululekileyo.
Vumela ubomi bakho bugele umlambo,
Phakathi kwamanxweme anokwethenjelwayo,
Vumela umendo wakho ukhanyise,
Inkwenkwezi ekhazimulayo ebizwa ngokuthi uthando
Bazali abathandekayo, uneholide namhlanje
Isikhumbuzo somtshato uPearl,
Ukuthobela kuwe kunye nokubonga,
Sinqwenela kuphela iintsuku ezonwabileyo.
Vumela inhlanhla incumo,
Vumela ubomi bugezelele kumlambo obusika,
Kwangathi abantwana kunye nabazukulu bangakukholisa,
Qhubeka ugcinwa yi-destiny.
Iminyaka engama-30 ijikeleze ngokukhawuleza,
Apha sele abazukulwana bakho behalalisela,
Maye inhlanhla ihambelane nayo yonke indlela,
Yeka intlanganiso kunye nani wonwabe.
Bazali abathandekayo, senza umzekelo kuwe,
Wena, njengendiza yezinto ezilungileyo kuthi,
Ithemba, ukholo kunye nothando bekunjalo nawe,
Ngoko ke, intsapho yethu inamandla kwaye inobungane.
Ubulumko bokutshata kwegolide
Isikhumbuzo segolide, iminyaka engama-50 yobomi bentsapho bhiyozelwa ngokubanzi kwaye ngokufanelekileyo. Abantu abasandul 'ukutshata baphindaphinda izifungo baze banike iisandja ezintsha, ngelixa abantu abadala beba yintsapho. Ukwenza ukuba isibini sibonakale siselula, sibanike ngokumnandi kunye nantlandlolo.
Umtshato wegolide! Le klasi!
Umncinci, omncinci, kunye nawe
Abantwana bakhula nge-yelp.
Iqhosha lemiba, njengaphambili, ayithethi,
Kwaye kungabikho kobuthixo kukubabalo;
Yondla bonke abazukulu nabazukulwana,
Baya kunika ubomi obuninzi ebomini!
Utatomkhulu, fundisa ukufunda, ukudlala;
Ubungqina, hambani, thandani nathi, utatomkhulu ...
Ukuba wawuseparadesi ngexesha lokuphila kwakho,
Emva koko ukuphela kothando notonwabo - hayi!
Uninazala kunye novavanyo-ubawo
Mkhulu wena, umkhwekazi nomkhwezala wakho -
Uneminyaka engama-50 uhlala kunye,
"Ugogo" "nomkhulu" kunokuba
Umyeni oselula, mtshakazi!
Kwimeko yakho yonke into yayiyiyo -
Ubomi obubini kunye nokubetha,
Iintshukumo zenzeke, zikhuphe ...
Ngoko phila kunye nawe
Iminyaka kwimpilo nenwabe ngamakhulu amabini
Konke ukuvuyela izihlobo kunye nabantwana!
Umtshato wakho siya kubhiyozela inkulungwane!
Amashumi mabini anamanci anesibini anesihlanu -
Kuvuyisa gqitha ukuvuyisana
Abantu ababini bayavuya.
Yaye ke, phendula:
Ukuthula kuwe, othandekayo!
Kwaye, ke, ubushushu,
Kwaye ngamandla kunye nempilo,
Ubomi buhlala buhlala
Sisebenzisa ukugcinwa komtshato ngokufanelekileyo
Utshintsho lobomi bomfazi emva komtshato
Umtshato onomsundu: ubuhle kunye nobukhosi buso
Ukukhetha ibhakabusi yasebusika yomcebisi weengcali zomcebisi
Umtshato wabantu: kunye nokuchasene
Unokukhetha njani indlela yokutshata yomtshato?
Ukuthengwa kwezenkolo: ezona zivenkile zeefashoni eParis
Unokunyamekela njani izityalo zaseLitrus
Ukuxilongwa kwe-crourosis ye-vulva
Indlela yokutsala umdla wabantu
Izipho ezimnandi kwiKrisimesi evela eKhanel naseArmani
Ukuchaneka ngokufanelekileyo ukuthatha iinkqubo zokuhlamba
Ndiyazi njani ukuba ndinayo inkukhu?
Ngaba unako ukuba ngumncedisi weTV?
Imithetho yokuziphatha ngomhla wokuqala
USvetlana Konegen, umbonisi weTV, i-biography
Izifo zoLuntu kwiTyxicosis
Ukuzithemba okuphantsi kunokunceda umfazi ukuba afumane iqabane ngokukhawuleza, abaphandi bakholelwa
UAza waxabana nomyeni wakhe wangaphambili ngenxa yomntwana oqhelekileyo
Uxinzelelo lwentliziyo yesibindi, izizathu kunye nokonyango lwexinzelelo
UGosha Kutsenko waziqhayisa ngencwadi ethi "iingcebiso ezinobungozi" kubantu abadala, ifoto
Ziziphi izifo zisebenzisa i-nettle?
Sikolo soBucala soLuntu